>D Ye Htet – The Battle Cry | MoeMaKa Burmese News & Media
>D Ye Htet – The Battle Cry
ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၀
ကမ္မည်းထိုးစရာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ ။
၂. ဖိနှိပ်မှု ချုပ်ချယ်မှု
၃ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက်
“၆၂” ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကောင်စီ “အစ”
“၇၄” ခုနှစ် မဆလပါတီအလယ်
“၈၈” ခုနှစ် ဒီကရေစီအရေးတော်ပုံ
ဆယ်စုနှစ် “နှစ်စုံ” အကြား
စစ်တပ်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်အောက်မှာ ရှင်သန်ဖွားမြောက်လာခဲ့ကြတဲ့
လွတ်လပ်မှုတွေ ဆိတ်သုန်းခဲ့ရပေါ့။ ။
၆ ဒီမိုကရေစီအရေး လူ့အခွင့်အရေး
မြွေပွေး “ခါးပိုက်” ပိုက်
သမိုင်းတရားခံ မဖြစ်စမ်းနဲ့ဟေ့။ ။
၇ ငါတို့ လက်ကို အမိအရဆွဲ
NLD-ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ
မြောင်းထဲမှာ နစ်သွားတော့မှာပေါ့။ ။
“၂၀၁၀” ရဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံကြား
ငါတို့ -ထုဆစ်လိုက်ရအောင်။ ။
(၂၇.၃.၂၀၁၀. နေ့ က. NLD `ရုံးချုပ်.တွင်ကျင်းပသော တော်လှန်ရေးနေ့နံရံကပ်စာစောင်မှ ပထမဆုရကဗျာ)